IBEVERLY CLEARY DEAD: IINYANI EZI-5 EZIKHAWULEZAYO EKUFUNEKA UYAZI - IINDABA
IBeverly Cleary Dead: Iinyani ezi-5 eziKhawulezayo ekufuneka uyazi
Beverly Cleary wabathandekayo ulutsha oluswelekileyo usweleke eneminyaka eyi-104 i-NPR , Umbhali weClearys uHarperCollins ukuqinisekisile ukudlula kwakhe ngoLwesihlanu. Isizathu sakhe sokuphulukana nobomi asichazwanga ngaphakathi kwesiqinisekiso.
Kwi ingxelo , USuzanne Murphy, uMongameli kunye noMshicileli kaHarperCollins, okhankanyiweyo: Sibuhlungu kukusweleka kukaBeverly Cleary, mhlawumbi ngababhali abathandekayo abancinci bexesha lonke. Ukujonga kwakhona, wayehlala esithi, 'ndibenobomi obunethamsanqa,' kwaye izizukulwana zabantwana zixhomekeke ekubeni nazo zinethamsanqa- ndinethamsanqa lokufumana abalinganiswa kanye uBeverly Cleary, kunye noHenry Huggins, uRamona kunye noBeezus Quimby, kunye URalph S. Mouse, njengabahlobo bokwenene abaye banceda ekwenzeni iminyaka yabo yokukhula. Thina eHarperCollins siziva sinethamsanqa ngokungaqhelekanga ekusebenzeni noBeverly Cleary kwaye ndimthandile. Iincwadi zakhe ezingaphelelwa lixesha kukungqinisisa unxibelelwano lwakhe lukanaphakade kulonwabo, imiceli mngeni, kunye noloyiso olunokuba yinxalenye yobuntwana nganye.
UBeverly Cleary wazalelwa e-Oregon ngo-Epreli 12, 1916; Nge-12 ka-Epreli kuqatshelwe njenge-D.E.A.R, aka Drop Yonke into kunye nokuFunda, imini, ngembeko yeCleary. Kucace ukuba unikwe iiveki ngaphambili kunekhulu lakhe lesihlanu lokuzalwa.
Nantsi into ofuna ukuyifunda malunga neBeverly Cleary:
1. Ukukhula, uCleary wafunda ukuthanda iincwadi kuMama wakhe
I-fedex ivuliwe ngosuku lomsebenzi
NgokweCleary's iwebhusayithi , U-Beverly Cleary wazalelwa eMcMinnville, e-Oregon, kwaye, de waba mdala ngokwaneleyo ukuba aye kwi-faculty, wayehlala kwifama yase Yamhill, isixeko esincinci kakhulu sasingenathala leencwadi. Umama wakhe waququzelela iLayibrari kaRhulumente ukuba iincwadi zithunyelwe eYamhill kwaye basebenze njengononcwadi kwigumbi lokulala kwigumbi eliphezulu kwiziko lezemali. Apho uBeverly omncinci waqonda ukuba uyazithanda iincwadi.
Kudliwanondlebe kunye Ukufunda iiRocket , UCleary waphawula, Xa bendikade ndikwi-grammar faculty, bendivakalelwa kukuba ikholeji ayifuni ukuba sifunde, ngenxa yokuba kuye kwakho imibuzo ende emva kwayo yonke into esiyifundayo, kwaye kwafuneka sibhale uvavanyo lwesikhokelo kwaye sinike Umxholo wesikhokelo… lowo yayingumbuzo endandiwuthiye kakhulu: 'Wawuthini umxholo wesi sikhokelo?' Ndidinga nje ukufunda isikhokelo kwaye ndonwabele kuso. Kwaye ndivakalelwa kukuba yinto ekufuneka yenziwe ngabaselula.
2. Abalinganiswa abathandekayo bakaCleary babephefumlelwe ngamava akhe obomi
Silusizi ngokwabelana ngesidalwa somkhokeli wolutsha uBeverly Cleary asinike izolo, nge-25 kaMatshi, eneminyaka eyi-104. https://t.co/Ifqu3Hfuxg pic.twitter.com/BXywlKTSac
-IHarperCollins (@HarperCollins) Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 2021
Iwebhusayithi kaCleary ityhila ukuba Xa ulutsha lubuza uNksk Cleary indawo afumana kuyo iingcinga zakhe, uphendula athi, 'Ukusuka kubuchule bam nakwilizwe elijikelezileyo.'
Ukufunda iRokethi kuye kwacela uCleary ukuba afumane inkuthazo kubalinganiswa abaye babuyela ebomini kwiincwadi zakhe. Impendulo yakhe yathi: Ukususela ebuntwaneni bam, ukusuka ebuntwaneni babanye endiva ngabo, ngesiqhelo kumaphephandaba. Ibali likaHenry Huggins kunye neGum Bubble lifike apha ukusuka kwiphephandaba. Uh, ngesiqhelo bakhangeleka ngathi baphuma-baphuma emoyeni, kwaye-kwaye, ngokufanelekileyo, kunye-Mnu. uqhawule umtshato. Kwaye khange ndicinge ngayo, nangona kunjalo ndikhankanyile ukuba ndiza kuyizama.
Kwimbali yakhe yobomi, uCleary ubonakalise ifuthe lobuntwana bakhe emsebenzini wakhe njengomdali. Utshilo, ndinethamsanqa nje. Ndineenkumbulo ezicacileyo zobuntwana. Ndifumanise ukuba abantu abaninzi abayenzi, kodwa ndinethamsanqa nje. Inkcazo ye memoir , inelungelo Intombazana evela eYamhill , uhlekisa ukuba ngaphakathi kumaphepha ayo, uBeverly Cleary ubalisa ibali labucala elongezelelekileyo-ibali lakhe — malunga nokuba ixesha lokufikisa lalinjani. Ngobushushu nangona kunjalo inokuthenjwa, uBeverly uchaza ubomi e-Oregon ngoxinzelelo olukhulu, kunye nobunzima bakhe ekufundeni ukuze afunde, kwaye abonise ukubulawa kwee-anecdotes ezazikho, mhlawumbi, ukukhuthazwa kweentsomi zakhe ezimbalwa azithandayo.
3. U-Cleary WayenguMama waBantwana abangamawele
IvidiyoIvidiyo enxulunyaniswa nokucaca ngokucokisekileyo iphelelwe lixesha: 5 ulwazi olukhawulezileyo ofuna ukulwazi2021-03-26T19: 02: 50-04: 00
UCleary ushiye abantwana bakhe ababini abadala, amawele uMalcolm James kunye noMarianne Elizabeth Cleary. Unokusinda ngabazukulwana bakhe abathathu kunye nomzukulwana omnye. Ngokuka-HarperCollins, ngexesha lokudlula kukaCleary, indlu yakhe ithi bangathanda ukubulela ugqirha wakhe, uGqirha Richard King, kunye nabasebenzi abaphakathi beCarmel Valley Manor.
U-Cleary, ngokuchaseneyo nabantwana bakhe abancinci, wayengenabo abantakwabo abavukayo; wayekuphela kosana. Ngoku ka IOregon ngoku , U-Cleary wavula ngalo lonke ixesha lokuphila kwakhe malunga nokusokola ekhayeni lakhe ngendlela yoxinzelelo. Uye wakhankanya, iPortland ngokudakumba yayimbi. Utata ukuphelelwa ngumsebenzi kwakubuhlungu. Ndikhumbula ngokufanelekileyo onke la madoda abukeka ngathi ajonge ukuza ekhaya kwaye umama akananto angabanika yona.
4. UCleary wayenguNethala ngaphambi kokuba azuze udumo njengoMbhali
Abantwana kufuneka bafundele ukuba ukufunda kuyonwabisa, ayisiyonto inye kuphela eyenziwa ngabahlohli ukuba bayenze esikolweni.
Enkosi, uBeverly Cleary ngokudala amabali abantu abaninzi abathanda ukufundisisa njengabaselula. Lala ngoxolo. pic.twitter.com/l11b70kSj6
-I-Barnes kunye neNoble (@BNBuzz) Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 2021
Phambi kokuba atshintshe abe ngumdali othandekayo, uCleary wakhuthaza ukunxibelelana kwakhe neencwadi kunye nolutsha njengelayibrari. Umsebenzi wakhe njengolayibrari wamkelwa ekhondweni likamama wakhe. Emva kokuphumelela kwiDyunivesithi yaseCalifornia eBerkeley, uCleary uqhubeke nokugxila kwilayibrari kwiYunivesithi yaseWashington, Seattle.
Ngelixa wayesebenza njengethala leencwadi eYakima, eWashington, uCleary wabethwa luhlobo lolutsha olwalumcela iincwadi malunga nolutsha olufana nathi, kwaye wayezimisele ukuqala ukuzibhalela. Waziswa kwakhona ebusheni bakhe, kunye nokukhumbula xa ilayibrari yakhe yemveli yacebisa ukuba kufanele ukuba abhalele amantombazana namakhwenkwe xa sele ekhulile.
Njengomdali, uCleary wahlonitshwa ngomsebenzi wakhe kwaye wafumana iMedbri yaseNewberry, iMbasa yeSizwe yeNcwadi yoLutsha yaBantu, iLaura Ingalls Wilder Award, kunye neMedali kaZwelonke yoBugcisa, phakathi kweembeko ezahlukeneyo kunye namabhaso.
5. Uchungechunge lweeNcwadi zikaCleary 'URamona & Beezus' zaJikwa zangumboniso weTV kunye neFilimu
Ifoto: GettyUMlawuli uElizabeth Allen, umlingisi uHutch Dano, umlingisi uJoey King, umlingisi u-Selena Gomez, kunye nomlingisi uBridget Moynahan baya kwi-premiere kaRamona noBeezus.
Xa isikhokelo esithandwayo sikaCleary malunga nodade uRamona noBeezus saziswa kwiscreen esikhulu, uDisney inkwenkwezi u-Selena Gomez waphoswa njengodade omkhulu u-Beezus, ngelixa umlingisi otyunjwe ngu-Emmy u-Joey King wayenomsebenzi wakhe wokuphumla njengo-Ramona. Xa ebuzwa malunga nesiqingatha esasithetha kuye, uKumkani wayalela Shumi elinesixhenxe ngexesha, Ngumsebenzi omkhulu! Unobuchule obukhulu bokuyila kunye nomntu omkhulu. Bendihlala ndichulumanca kakhulu ukufumanisa ukuba bendiqhele ukuba nguRamona njengesiphumo sokujikeleza kwakhe iminyaka engaphezulu kwama-50. [Ndithe ndakufumanisa ukuba ndiyifumene indima] umama wam ndalila iinyembezi zovuyo!
Kwisigqibo sakhe sokubhala uRamona njengomntu kwaye kutheni ekholelwa ukuba uRamona wahlangana nababukeli abakhulu kangaka babafundi abancinci, uCleary wayalela iRocket Rockets, akafundeli ukuba yinkosikazi enkulu. Bendihlala ndicaphuka ziincwadi ebuntwaneni bam, ngenxa yolutsha lonke ixesha eliqondwa njengabantu abancinci abaphezulu, kwaye kubuchwephesha bam, khange benze njalo. Bayakhula ngokulula, kwaye ke ndaqala uRamona, kwaye-kwaye akazange ahlaziye.
I-RIP Beverly Cleary, izigidi zamanenekazi azibonile eRamona Quimby, enkosi kuzo zonke izinambuzane ezentengiso.
-UJill Biden (@FLOTUS) Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 2021
Njengoko ulwazi lokulahleka kobomi bukaCleary luvela, uMongameli wokuqala uJill Biden walilela ukulahleka kwi-Twitter, ukubhala, uRIP Beverly Cleary. Izigidi zamanenekazi zaziqaphela eRamona Quimby. Enkosi kuzo zonke izinambuzane ezivenkileni.
Izigaba: Hollywood Inetflix Tech-Iindaba
Thumela i-imeyile ngomhla we-4 kuJulayi
Ngaba kukhona ukuhanjiswa kweposi ngomhla weshumi elinethoba
shawn stewart iinduli
Ngaba kukho ukuhanjiswa kweposi kunyaka omtsha
Iindlu zeholide zekrisimesi
jt ubudala ntombazana isixeko